बलात्कार र सामाजिक चिन्ता | eAdarsha.com
बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टलाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटना चर्किरहेको बेला मोरङ जिल्लाको जहदा गाउँपालिका–१ की १४ वर्षीया किशोरीको बलात्कार गरिएको घटना बाहिर आएको छ । किशोरी बेलुकी शौच गर्न जाँदा मोटरसाइकलमा आएका २ जना युवाले उनलाई जबरजस्ती उठाएर लगेका थिए । बलात्कारपछि ती युवाले किशोरीलाई घर नजिकै ल्याएर छाडेर गएका थिए । बैतडी घटनामा प्रहरी अपराधीको नजिक पुगेको र छिट्टै आफूले नियन्त्रणमा लिने बताएको छ भने मोरङ घटनामा अपराधीको पहिचान गएको र तिनीहरु फरार रहेका बताइएको छ ।
देशमा बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै गएको छ । बलात्कार गर्नु कानुनी रुपले अपराध हो । अपराध गर्नेलाई कानुनले दण्ड सजायँ गर्दछ । त्यसरी दण्ड सजायँ पाउनेलाई समाजले हेय दृष्टिले हेर्दछ । बलात्कार गर्नु कुकृत्य हो । त्यसलाई निन्दनीय मानिए तापनि त्यस्तो घटना बढ्दै गएको छ । यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस्तो घटना प्रहरी प्रशासन गुहार्दैमा तथा कानुनले सजाय दिन्छ भन्दैमा त्यसै बस्ने बेला यो होइन । यसमा हामी केही गम्भीर हुनै पर्दछ र किन यस्तो घटना फेरि फेरि दोहोरिदै गएको छ, बढ्दै गएको छ । त्यसमा दृष्टि लगाउनु आवश्यक छ ।
हाम्रो शिक्षादीक्षामा कमीकमजोरी छ कि ? त्यतातिर पनि दृष्टि लगाउनु आवश्यक छ । नेपालमा बलात्कारका घटना पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएको छ । हाम्रा युवा किन बलात्कारी हुन्छन् ? यसमा सोधखोज गरिनुपर्दछ । अध्ययन र अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । त्यस्तै हाम्रो सामाजिक संरचनामा कतै गल्ती त छैन ? भनेर पनि एक पटक नियाल्नु पर्दछ । साथै हाम्रो संस्कार र संस्कृति पनि त्यसको जिम्मेवार छ कि ? त्यतातिर पनि ध्यान दृष्टि लगाउनु पर्दछ । हाम्रा सामाजिक अभियन्ता, धार्मिक गुरु, शिक्षण संस्थाका गुरु सबैले आफ्नो उत्पादन किन त्यस्तो भएर निस्के भनी त्यसमा किँचित मात्र भए पनि सोच्नु आवश्यक छ । किनभने एक दुई घटना मात्र भए केही थिएन तर यो घटना व्यापक रुपमा हुँदैछ, फैलिँदैछ । यसलाई प्रहरीले गरिहाल्छ भनेर तथा बलात्कारीलाई कानुनले ठीक गर्दछ भनेर बसेर मात्र यो घटना घट्ने देखिँदैन । बलात्कार भयो भनेर मात्र अब पुग्दैन । किन भयो, कसरी भयो र घटना न्यूनीकरणको उपाय आदि इत्यादिबारे चिन्तन मनन गर्नु पर्दछ । साथै कहाँ के कमी कमजोरी भएर यस्तो भएको हो, त्यसलाई हटाउनु सक्नु पर्दछ ।
देशमा अन्योलको स्थिति
सम्पादक फागुन १८, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गर्ने सवालमा सर्वाेच्च अदालतबाट पराजित भएको सर्वविदितै छ । पराजितपछि नैतिकता हिसाबले उनले राजीनामा…
कमलपोखरीमा कमल फुल्न देऊ
सम्पादक फागुन १७, २०७७
काठमाडौंको कमलपोखरीमा केही वर्षदेखि विवाद बढ्दै गएको छ । वरिपरि ठूल्ठूला भवन बनाएर कमलपोखरीमा पानी कम हुँदै गएको बेला २०७२…
योग्य व्यक्तिको अवसान
नेपालका पहिलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) का रुपमा ख्याति कमाएका कुवेर शर्माको ८१ वर्षको उमेरमा हृदयघात भई काठमाडौंमा निधन भयो ।…
सम्पादक फागुन २०, २०७७
अनलाइन प्रणालीबारे थाहा नहुँदा श्रम कार्यालयमा भीड
पानी भए पो पँधेरो : रुपाका गाउँमा अझै खानेपानी समस्या
‘Remittance and social networking site misuse’ behind rising divorce incidents